नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र वैधानिकीकरण पनि अब अनलाइनबाट मात्र हुने, यस्तो छ प्रक्रिया! - Khabar Center
नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र वैधानिकीकरण पनि अब अनलाइनबाट मात्र हुने, यस्तो छ प्रक्रिया!
आउँदो जेठ ६ गतेदेखि नयाँ श्रम स्वीकृति र वैधानिकीकरणमार्फत हुने श्रम स्वीकृति पनि अनलाइनबाट मात्र हुने भएको छ ।यसअघि भौतिक रूपमा कार्यालयमै उपस्थित भएर लिनु पर्ने व्यक्तिगत नयाँ श्रम स्वीकृति र वैधानिकीकरणमार्फत लिने श्रम स्वीकृति पनि अनलाइनबाटै लिन मिल्ने भएको हो।
यसअघि गएको माघदेखि नै पुनः श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट मात्र लिन मिल्ने व्यवस्था भएको थियो भने वैशाख २ गतेदेखि संस्थागत श्रम स्वीकृति पनि अनलाइनबाटै प्रदान भइरहेको छ।
यसअघि वैधानिकीकरणमार्फत दिइरहेको श्रम स्वीकृतिलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक सरह श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।
गर्नु पर्ने प्रक्रिया:
श्रम स्वीकृति लिएर मात्र टिकट काट्नुहोस्:
प्रकाशित मिति :बैशाख २७ २०७९ मंगलवार - १६:०२:४० बजे